News - Isbeddelka iyo horumarinta qalabka mashiinka
Isbedelka iyo horumarinta qalabka mashiinka
Horumarinta aaladaha mashiinka ayaan laga maarmi karin baahiyaha horumarineed ee warshadaha wax soo saarka mustaqbalka. Tusaale ahaan, horumarinta warshadaha sida tamarta, cuntada, injineernimada caafimaadka, isgaarsiinta, gawaarida iyo mashiinada beeraha waxay saameyn weyn ku yeelan doonaan horumarinta qalabka mashiinka mustaqbalka.
Tusaale ahaan, qalabka ku jira warshadaha sida tamarta iyo mashiinada beeraha guud ahaan waa mashiinno waaweyn. Marka la shaqeynayo qalabkan, aaladda mashiinka waxay u baahan tahay inay lahaato tiirarka dunmiiqa sare, awoodda dunmiiqa oo sare iyo meel shaqo oo weyn. Shuruudda gaarka ah ee qalabka mashiinka ayaa ah in la helo shaqooyin badan oo caadooyin ah halkii laga heli lahaa mashiinno gaar ah.
Qalabka ku jira injineernimada caafimaadka, isgaarsiinta iyo warshadaha kale guud ahaan waa qalab yar. Waxyaabaha ay ka kooban yihiin qalabkan ayaa sii yaraanaya marba marka ka dambeysa, qaab dhismeedka ayaa sii kordheysa isafgaradkiisa, jawiga kala duwan ee goynta ayaa loo baahan yahay inta lagu guda jiro howsha. Mararka qaarkood waa lagama maarmaan in la farsameeyo walxaha adag ee la jarayo sida aluminiumka titanium. Sidaa darteed, saxsanaanta sare iyo adkaanta adag ayaa looga baahan yahay qalabka wax lagu farsameeyo. Marka la eego shuruudaha wax soo saarka gaarka ah, injineernimada caafimaadka (xalalka la beegsanayo) waxay u baahan yihiin mug yar iyo tayo sare. Dhinaca tikniyoolajiyada isgaarsiinta, cabir yar iyo tartan qaali ah ayaa loo baahan yahay.
Warshadaha wax soo saarka baabuurta, guud ahaan waa wax soo saar heer sare ah, oo u baahan isdhexgalka tikniyoolajiyadaha kala duwan ee wax soo saarka meel yar. Tani waxay u baahan tahay teknoolojiyad cusub oo wax lagu farsameeyo si loo farsameeyo qalabka biraha cusub, iyo mashiinno cusub oo wax lagu farsameeyo si loogu farsameeyo agabyada cusub sida qalabka fiber-ka. Shuruudaha looga baahan yahay warshadaha wax soo saarka baabuurta ee qalabka mashiinka ayaa ah in mustaqbalka, hal mashiin loo isticmaali karo ka shaqeynta iyo isku imaatinka. Marka la eego keenista qalabka mashiinka, qalabka mashiinka waxaa looga baahan yahay inay lahaadaan meel balaaran oo wax lagu farsameeyo oo ku haboon wax soo saar ballaaran.
Markaad fiirineyso shuruudaha noocyada kala duwan ee warshadaha ee qalabka mashiinka, mustaqbalka, qalabka mashiinka waa inuu buuxiyaa shuruudaha aasaasiga ah ee soo socda: khaladaadka saxda ah ee yar yar, isticmaalka tamarta oo yaraaday, waqtiga howsha oo gaagaaban, guud ahaan tayada wax soo saarka guud iyo joogtaynta
Waxaa jira shuruudo gaar ah oo kala duwan oo loogu talagalay alaabooyinka kala duwan: cabbirro kala duwan, noocyo kala duwan oo badeecooyin ah, iyo ka shaqeynta qalabka cusub.
Waxaa jira laba isbeddel oo ku saabsan mustaqbalka horumarinta qalabka mashiinka: horumarinta nidaam wax soo saar dhameystiran oo buuxiya shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha; iyo hagaajinta waxtarka guud iyo joogtaynta qalabka.
Waqtiga dhejinta: Feb-28-2021